China Wires mpanamboatra sy mpamatsy | Longxiang
Izy io dia vita amin'ny alàlan'ny tariby vy ambany karbaona, amin'ny alàlan'ny fanaovana sary an-tariby, fanasana asidra ary fanesorana ny harafesina, fampidirana an-tany ary famokarana. Ampiasaina indrindra amin'ny asa fanamboarana, asa-tanana, harato tariby, harato fomba mazava, fonosana vokatra ary fampiasana isan'andro.
Halavan'ny habe: BWG 8-BWG 22
Zinc palitao: 45-180g / m2
Herin'ny krizy: 350-550N / mm2
Hot atsobohy ny tariby vy
Izy io dia vita amin'ny tariby vy ambany karbaona voafantina, amin'ny alàlan'ny fanaovana sary an-tariby, fanasana asidra ary fanesorana ny harafesina, fampidirana an-tany ary famokarana.
Ampiasaina indrindra amin'ny asa fanamboarana, asa-tanana, harato tariby, harato fomba mazava, fonosana vokatra ary fampiasana isan'andro.
Zinc palitao: 45-260g / m2
Tariby vy nandrendrika elektro
Ny tariby vy mandeha amin'ny alàlan'ny elektro dia vita amin'ny vy malefaka voafantina, amin'ny alàlan'ny sary an-tariby, fanamafisam-peo ary fomba hafa. Ny tariby vy mandeha amin'ny alàlan'ny electro dia manana ny mampiavaka ny firakotra zinc matevina, ny fanoherana ny harafesina tsara, ny firakotra zinc marihitra, sns. Ampiasaina matetika amin'ny fefy, fefy miharihary, fatorana voninkazo sy fanenomana harato.
Zinc palitao: 10-18g / m2
Wire antsy mainty： Ny tariby misy annealed mainty dia ampiasaina matetika amin'ny tariby indostrialy, tariby fananganana, tariby bale indostrialy ary tariby mifatotra sns.
Famaritana ny tariby mihombo
PVC mifono tariby:Amin'ny alàlan'ny fanodinana lalina, ny plastika sy vy tariby dia mitambatra mafy, miaraka amin'ny anti-antitra, anti-harafesina, manohitra vaky ary ireo toetra hafa.
Rehefa avy mifono
Toy ny fangatahana
Wire Coil kely: Ny tariby coil kely dia tariby metaly aorian'ny fitsaboana eo amboniny, misy takelaka landy lehibe ao anaty tariby coil kely, ny lanjan'ny fifehezana tariby miolakolaka kely ao amin'ny 1-2.2 kg na mihoatra izany, amin'ny fiasa amin'ny rivotra dia mety kokoa ny mitondra azy.